रेग्मीलाई बीपी साहित्य सम्मान « Naya Page
रेग्मीलाई बीपी साहित्य सम्मान
प्रकाशित मिति : September 4, 2021
काठमाडौं, १९ भदौं । जननायक बीपी कोइराला स्मृति ट्रष्टले प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्दै आएको बीपी साहित्य सम्मान पुरस्कार आधुनिक नेपाली साहित्यका वरिष्ठ कवि मदन रेग्मीलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पाँच दशकभन्दा पहिलेदेखि साहित्य साधनामा रहेर नेपाली काव्य साहित्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका कवि रेग्मीका कविता संग्रहहरुसँगै साहित्यिक कृतिहरु प्रकाशित छन् । नेपाली साहित्यमा पुर्‍याएको योगदानको सम्मान गर्दै रेग्मीलाई पुरस्कार दिने निर्णय गरिएको ट्रष्टले जनाएको छ ।
ट्रष्टले प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्ने बीपी सेनानी पुरस्कार भक्तपुरका प्रजातन्त्र सेनानी तिलकप्रकाश कायस्थलाई दिने निर्णय गरेको छ । लामो समयसम्म जेलमा र निर्वासनमा रहेर प्रजातन्त्र स्थापना, पुनस्र्थापना तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै उनलाई उक्त पुरस्कार दिने निर्णय गरिएको ट्रष्टले जनाएको छ ।
दुवै पुरस्कार बीपी जयन्तीको दिन अर्थात भदौ २४ गते प्रदान गरिने बताइएको छ । पुरस्कारको राशी एक लाख एक हजार र ५१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । ट्रष्टका कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम बस्नेतको संयोजकत्वमा ट्रष्टका सदस्यहरु डा. धुब्रचन्द्र गौतम र सुशीलमान शेरचन सदस्य रहेको सिफारिस समितिले सर्वसम्मतिबाट पुरस्कार वितरणको निर्णय गरेको हो ।
कालिजपालनमा किन बढ्यो आकर्षण ?
गुडिरहेको बसमा लाग्यो आगो
एमाले अधिवेशन : यी हुन् सिन्धुपाल्चोकका ९० वडामा निर्वाचित अध्यक्ष
प्रधानमन्त्री पूर्वको बाढी–पहिरो प्रभावित जिल्लाको निरीक्षण भ्रमणमा जाँदै
काठमाडौं, ७ कात्तिक । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पूर्वका जिल्लामा बाढी–पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिको निरीक्षणका लागि पूर्वी
काठमाडौं, ७ कात्तिक । भारत सरकारले जयनगर–कुर्था सीमापार रेल खण्ड शुक्रबार हस्तान्तरण गरेको छ ।
अनिश्चित बन्दै कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन
काठमाडौं, ७ कात्तिक । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन थप अनिश्चित बन्दै गएको छ